Schmidt Zvipfeko: Anotaridzika Meso Evakadzi
Chaiyo Zebra Wood Browline Chimiro RetroShade Sunglass neWUDN
Regular price $80.85 Sevha $ -80.85
Yemasanganiswa Zebra Wood Browline Sunglasses
Kubatanidza eco-inoshamwaridzika acetate browline akagadzirwa mafuremu ane ese-echisikigo zebra matanda matembere, yedu Mbeu dzakauchikwa browline magirazi ezuva ndiwo akakwana musanganiswa weyakajeka uye echinyakare dhizaini. Kutenda kune yakasarudzika, zigzag woodgrain pateni yeiyo mbizi huni, rimwe nerimwe reaya magirazi ezuva ehuni ndeemumwe-werudzi - achipa siginecha chimiro chirevo chakasarudzika seanopfeka.
1Yakagadzirwa nemaoko, akachekwa, uye akagadzirwa kubva kunzvimbo yemunyika yakachekwa mbizi zvinhu uye eco-inoshamwaridzika acetate browline-akafemerwa mafuremu
2Indasitiri-inotungamira lenzi dzakasarudzika kujekesa kusingaenzanisike mune yakajeka mamiriro
3Super yakasimba, Ultra-inoshanduka dhizaini yekutenda kune isina simbi simbi chitubu chakatakura hinji
4Inouya neCylindrical Bamboo Inotakura Nyaya & Micro-Fiber Yekufamba homwe
YAKADZIDZISWA nemhando yepamusoro yakasungirirwa lenzi, iyo yemasanganiswa mbizi huni browline magirazi ezuva anopa yakakwana UVA / UVB dziviriro nepo anti-kupenya, kukwenya kusagadzikana kupfeka kunochengetedza chiono chako sekristaro chakajeka kunyange mumamiriro akajeka.
Maitiro Ekuchimanje kuChinyakare Chisingagumi
Kubatanidza iyo yazvino aesthetics yemuno yakasvinwa mbizi huni neyekare browline dhizaini, yega yega yeHybrid yedu browline mimvuri ndiwo musanganiswa wakakwana wekare uye wazvino.
Ultra-Inogadzikana Dhizaini Yakavakirwa Kuti Ipedze
Dual yakasimbiswa simbi isina tsvina yegore-yakatakura hinji inoita yega yega magirazi edu emapuranga akavakirwa kuti agare paunenge uchikupa yakakwana.
Mutengi Mibvunzo uye Mhinduro
Ko magirazi ezuva akagadzirwa nematanda here?
Hongu, yega yega WUDN magirazi ezuva akagadzirwa kubva kuhuni chaihwo.
Iwo magirazi saizi imwe inokwana zvese?
Ehe, WUDN magirazi ezuva ane saizi imwe inokwana zvese. Mamwe magirazi edu akakura kupfuura mamwe. Semuenzaniso, iyo skateboard magirazi anomhanya akati kurei uye anotaridzika zvakanyanya pavarume.
Ndiwo magirazi Ray-Ban?
Magirazi egirazi eWUDN haasi aRay-Ban, kunyangwe isu tichiomerera kune yakasarudzika dhizaini zvese maererano nehukuru uye dhizaini.
Ndinofanira kunetseka nezve mvura here? Magirazi aya haana mvura sei?
Magirazi acho haana mvura zvachose. Ndakaapfeka mudziva. Haufanire kunetseka nezvekuti ivo vatore.
Ini ndinofanira kuwana inoenderana yehuni kesi kesi?
Ehe saizvozvo. Yako matsva magirazi egirazi anotaridzika kunge akanaka neanoenderana bamboo foni kesi yeako iPhone kana Samsung Galaxy foni.
Iwo malenzi akaparadzaniswa here?
Hongu, yega yega WUDN magirazi ezuva anouya neakaremara lenzi. Ese edu magirazi egirazi echisikigo akagadzirwa neindasitiri-inotungamira CR39 lenzi dzakarukwa. Ndiko 100% UVA / UVB dziviriro, yepamusoro kukwenya kusagadzikana uye anti-kupenya kwekupfeka kwekristaro yakajeka chiratidzo mune kunyange inopenya mamiriro.
Malenzi akapindirwa anobatsira here uye ndinofanira kubhadhara zvakanyanya?
Kana iwe ukapedza yakawanda yenguva yako panze, mumugwagwa, munzira yegorofu, hove, kuvhima, pamusoro pemvura kana mumakomo, lenzi dzakapindirwa dzakakodzera peni imwe neimwe.
Ndingavaendese here kwachiremba wangu wezve meso uye malenzi achinjwe kuita lenzi?
Pane mamwe mamodheru anosanganisira magirazi emishenjere, unogona. Asi zvingave pane optometrists kuona kana kutora kana kusaisa lenzi nyowani. Zvinenge zvinosuwisa kuti chigadzirwa chako garandi zvakare.
Iwo malenzi epurasitiki kana girazi?
Iwo malenzi ane simba risingapindiki polycarbonate lenses, block 100% ye UV mwaranzi uye ine anti-glare maficha.
Maelensi ekutsiva aripo here?
Kwete, magirazi acho anowanzo kuve chidimbu chimwe uye haauye nesarudzo yekutsiva lens.
Ko bhandi rembambo rinouya nemagirazi here?
Ehe, iyo bamboo cylinder inouya nemagirazi. Vanhu vanofarira kesi uye vanowanzoishandisa kune zvimwe zvinangwa.
Ko magirazi anouya aine micro-fiber inotakura bhegi inopetana seyechenesa lens?
Ehe. Uye uyu mubvunzo wakaumbwa zvakakwana.
Miti inochenesa mweya wedu, inotipa mumvuri, uye inotipa chikafu chinonaka .. Ndosaka pamuti wega wega unopa hupenyu hwezvigadzirwa zvedu tichadyara one 1 kune 1.